Faritra Itasy: efa maro ny tantsaha manao fambolena biolojika | NewsMada
Faritra Itasy: efa maro ny tantsaha manao fambolena biolojika
Par Taratra sur 07/12/2018
Entanina amin’ny fambolena biolojika ny tantsaha an’arivony any amin‘ny faritra Itasy. Raha tsorina ny hoe fambolena biolojika, voly tsy mampiasa akora simika na akora hafa tsy voajanahary, toy ny zezika simika. Mitondra ny anjara birikiny amin’izany ny orinasa Homeopharma manofana ireo tantsaha any an-toerana momba izay fambolena biolojika izay ho fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ho fampitomboana ny vokatra sy ny fanatsarana ny kalitaony. Efa hita ny fahombiazan’ireo tantsaha sasany momba izany teknika izany, toy ny any amin’ny kaominina Morarano.
Miitatra any amin’ny kaominina hafa izao ny fampiharana azy, any Antanambolo, Ambohitrambo, Ambohimasina natao amin’ny alalan’ny tetikasa Avotra. Misy fiantraikany amin’ny fiatrehana ny fiovan’ny toetr’andro izany, raha voafehy tsara ny fampiharana azy io. An-jatony ireo nomena fiofanana momba ny fambolena biolojika hialana amin’ny fomba mahazatra taloha. Ny « compost bio », ohatra, anisan’ny fampiharana izany feno, hiadiana amin’ny bibikely manimba voly.
Nanokanana fotoana ny fanentanana izany any amin’ny faritra Itasy ny volana novambra teo, manerana ny distrika telo. Izany anefa tsy misakana ny avy any amin’ny faritra hafa handray ny fahaizan’ny tantsaha any Itasy sy ny hampita ny traikefa ny avy any aminy. Niaraha-nijery ny tany volena, ny mety amin’ny legioma, ny voankazo, sns.
Voalaza fa 40 tapitrisa ha ny tany mamokatra eto Madagasikara, nefa ampahany kely monja amin’izay fotsiny ny voavoly. Kely ny vokatra, ratsy ny kalitao, tsy ampy sakafo ny ankamaroan’ny Malagasy. Mbola nofinofy aloha hatramin’izao ny ho sompitra aty amin’ny ranomasimbe Indianina. Io fambolena sy fiompiana io no tokony ho laharam-pahamehana voalohany ho an’izay mpitondra manaraka eo.